FLY DUBAI OO KA HADASHAY DHACDADII MAANTA EE MADAARKA DIYAARADAHA HARGAYSA | Maalmahanews
FLY DUBAI OO KA HADASHAY DHACDADII MAANTA EE MADAARKA DIYAARADAHA HARGAYSA
Hargaisa:(Maalimahanews) Shirkadda diyaaradaha ee FLY DUBAI ayaa ka jawaabtay war la xidhiidhay haweenay rakaad ahayd oo duulimaadkii saaka ee diyaaradaasi ka raaci lahayd madaarka Hargaysa,balse isaga hadhay kadib markii uu muran dhex maray shaqaalaha diyaaradaasi.
Haweenaydaasi oo diiday in ay fadhiisato kursigii loogu tallo-galay, isla markaana ka cudur daaratay in ay kursiga la siiyay fadhiisato iyadoo Ilmo aad u yar wadatay awgeed.
Hase yeeshee dadkii kale ee diyaaradda saarnaa ay shaqaalaha diyaaradda ka codsadeen in kursiga ay rabto lafadhiisiyo taasoo shaqaalaha diyaaradu diideen, iyadoo sidaas ay hooyadii lamaanayd kaga hadhay duulimaadkaasi.
War qoraal ah oo ay dhacdadaasi kaga jawaabayso shirkadda diyaaradaha ee FLY Dubai oo soo gaadhay shebekadda SDWO ayaa lagu sheegay in ay mudnaanta koowaad siiyaan bad-baadinta rakaabka, isla markaana ay shaqaalaha diyaaradu si xushmad le hula dhaqmaan rakaabka.
Warkaasi qoraalka ah ayaa u dhignaa sidan:
“Waxaanu la soconaa maanta xaalada ka abuurantan gudaha duulimaadka flydubai (www.flydubai.com) ee FZ660, 25 August ee Hargeisa ilaa Dubai ahaa.
Gabadh rakaab ahayd ayaa diiday inay fadhiisato kursigii ay siiyeen shaqaalahaayaga diyaarada ee tobobaran, taasoo diiday inay raacdo diyaaraad oo ay tagto Dubai oo ay ku socotay kana hadhay.
Waxaa mudnaanta koowaad aanu siinaa badbaadada rakaabkaayaga iyo shaqaalahaayaga waana in shaqaalahaayaga iyo rakaabkaayagaba si xushmad leh loola dhaqmaa”.
“Waxaanu ka raali galinaynaa dhamaan rakaabkii saarnaa diyaarada wixii uga yimid dib u dhicii ku yimid duulimaadka.
Waxaanu wadnaa baadhitaan dhamaan cidii ku lugta lahayd. Duulimaadka lambarkiisu yahay FZ662 oo Hargeysa ilaa DXB ah, waxa uu dib u dhacay isugayn 1 saac iyo 39 daqiiqo APO qaybiyey oo ku hadlaya magaca flydubai”.
Sources by SDWO